Warbixin: Shaqaalaha gurmadka dab damiska iyo dhibaatada ay kala kulmaan marka ay musiibo dhacdo – Kismaayo24 News Agency
Warbixin: Shaqaalaha gurmadka dab damiska iyo dhibaatada ay kala kulmaan marka ay musiibo dhacdo
by Tifaftiraha K24 1st March 2017 099
Cabdisalaam waxa uu sheegay in shaqaalaha gurmadka dab damiska ay badbaadiyeen dad aad u badan muddadii afarta sano ee ay hawlgalka ku jireen haddii ay tahay meel dab ka gubanayo iyo xaaladaha kale ee deg degga ahba.
TOP NEWS: C/raxmaan c/shakuur” Madaxweyne farmaajo iyo ra’isul wasaare kheyre waxaa horyaala 5 arimood oo caqabado ku ah”
Daawo: Maxaadan ogeyn oo midowga yurub iyo dowlada federaalka ay ku heshiiyeen xili bixinta mushaaraadka ciidamada booliska ay….?
Maamulka Ahmed Madoobe oo saddex wariye ku xiray magaalada Kismaayo. Maxay tahay sababta?
admin 10th June 2014 28th August 2015
Dhageyso+ Sawiro: Soomaaliland Sidee u soo dhaweysay Guddigii Dowlada Federaalka ay Lacagta u dhiibtay oo Maanta Hargeysa gaaray